ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 39.3 ၀ိုင်နတ်သမီး ပြုစားတဲ့ည
ဟ ဟ ဟ...န န ဘ၀...helpless
ဇတ်လမ်းလေးများ ပါမလားလို့...။ ဟိ...။
ပြုံးသွားသည် ။း)းDးP
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ အဲလိုကြီးလားး)
ရယ်လိုက်ရတာ ပြောမနေနဲ့။ ;))
So pity of u.
ဟိ ဟိ...... ဒီနေ့ ကံမကောင်းပါလားလို့ ရော တွေးမိခဲ့သေးလားးP
Wine is romantic. Very funny to read your post. Nice!
အမလေး ရယ်လိုက်ရတာ၊ သီးတောင် သီးသွားတယ်။
ဘက်ထရီအိုးနဲ့ ဥပမာ ပေးတာကလည်း ထိမိပါပေရဲ့။ ကဗျာမဆန်သော အမှန်တရားတွေပေါ့လေ။ နှောင်းလူများ သတိထားဖို့ပေါ့နော။ ထောက်ခံပါ၏။ နောက်ဆုံးစာကြောင်းကတော့ အနောက်ဆုံးပဲး)
ha ha ha ha .......very nice ....
ကျွန်တော်က သိပ်ကြိုက်...ဘယ်နှယ် ဟိုကဘီယာတွေပါဝယ်လာပေးတာ..ဒါမျိုး